दाङ-सल्यान हुँदै रोल्पासम्मका सडकमा गाडीवालाको रजाई, यात्रुहरुको विचल्ली « Postpati – News For All
दाङ-सल्यान हुँदै रोल्पासम्मका सडकमा गाडीवालाको रजाई, यात्रुहरुको विचल्ली
खकेन्द्र केसी पढ्न लाग्ने समय : ६ मिनेट
जेठ १८, सल्यान । यातायात व्यवसायीहरुले क्यू सिस्टमबाट गाडी संचालन गर्दा सल्यान र रोल्पाका यात्रुहरु समस्यामा परेका छन् । यो समस्या दाङबाट गाडी संचालन हुने सल्यानका विभिन्न ठाउँ र सल्यानको बाटो हुँदै रोल्पासम्म गाडी पुग्ने ठाउँहरुमा देखिएको छ ।
केहिसमय अघि दाङ-सल्यान हुँदै रोल्पा झ्यामसम्म आउने शारदा यातायात सेवा प्रालिको गाडी । अहिले झ्याम आउने बस दमाचौरसम्म मात्र आउने गरेको छ ।
केहिदिन अघि दाङ र सल्यानबाट संचालित यातायात व्यवसायीहरु मिलेर क्यू सिस्टममा गाडी संचालन गरि सडक एकलौटी गरेपछि अहिले यात्रुहरु समस्यामा परेका हुन् । गाडी धनिहरुले मनपरि यात्रु कोच्ने, बसमा नअटाए बिचैमा छोड्ने र सामानको मनपरि भाडा तोक्दा यात्रुहरु ठुलो समस्यामा परेका छन् ।
यो समस्या दाङबाट सल्यानको दमाचौर हुँदै रोल्पाको झ्याम, दाङबाटै सल्यानको कोटमौला पातिहाल्न, बाफुखोला, लेखपोखरा, स्यानीखाल, फारुला, गुरुदासे, जयचौर लगाएतका ठाउँमा धेरै देखिएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो समस्या झ्याममा
क्यूमा गाडी संचालन गर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या सल्यानको दमाचौर हुँदै रोल्पाको झ्यामसम्मको रुढमा देखिएको छ । यो रुढमा पहिले दुईवटा बस नियमित संचालन हुँदै आएकोमा अहिले क्यू सिस्टमले गर्दा एउटा मात्रै संचालन हुने गरेको छ ।
यहाँ पहिले दाङबाट दामाचौर, झ्याम हुँदै रोल्पाको सुकाओडारसम्म एउटा र झ्यामसम्म अर्का गरि दुईवटा बस संचालन हुने गरेका थिए । सुकाओडारसम्म पहिले राप्ती सार्वजनिक, सल्यान रुकुम, सिस्ने हिमाल यातायात व्यवसायी समिति र नमस्ते राप्ती यातायात प्रा.लि.ले संयुक्त रुपमा क्यू मिलाएर गाडी संचालन गर्दै आएका थिए । झ्यामसम्म भने शारदा यातायातले अर्काे गाडी संचालन गर्दै आएको थियो ।
तर अहिले यी सबै यातायात र प्रालि मिलेर सुकाओडारसम्म मात्रै एउटा गाडी संचालन गरेका छन् । जसको असर झ्यामसहित आसपासका थुप्रै गाउँका नागरिकलाई परेको छ ।
कच्ची सडकमा पनि बसको क्षमता भन्दा दुईगुणा यात्रु चढेर जोखिम मोल्नुपरेको बुँरासेका स्थानीय दलबहादुर ओलीले बताए । उनले भने, यहाँ यात्रुलाई भेडाबाख्रा कोचेजस्तै कोच्छन्, गाडी पुरै प्याक भएपछि यात्रु नराखेर बिचैमा अलपत्र पार्छन् ।”
यसरी एक्लोटी संचालन हुँदा गाडी धनिले मनपरी भाडा लिने गरेको अर्का स्थानीय सेर बहादुर केसीले बताए । उनले भने, “सामान्य खालको सामान गाडीमा दाङ पठाउदा अफुखुसी चर्काे भाडा लिन्छन् ।”
गाडीवालाको यहाँ दादागीरी भएको झ्यामका स्थानीय बताउछन् । नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने, “गाडीले छतमा समेत मान्छे राख्छ, हामीले फोटो खिच्दा गाडीसँग मिलेका यहाँका एक दुईजना व्यापारीले मोबाइलको फोटो डिलिट गरिदिन्छन् । डिलिट नगर्दा ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन ।”
दमाचौर सम्म संचालन हुँदै आएको बसलाई झ्यामसम्म संचालन गर्नुपर्ने यहाँका नागरिकको माग छ । यदि अब यातायात समितीले आफ्ना कुरा नसुने सुकाओडार जाने बसलाई झ्यामै राख्ने उनिहरुको चेतावनी छ ।
सेवाका नाममा पदको लाभ
पछिल्लो समय सल्यानमा सेवामुलक गाडी संचालन गर्छौ भन्दै थुपै्र प्रालि खुलेपनि पछि समिती सँग मिलेर क्यूमा गाडी संचालन गरेर सिन्डीकेट लादिरहेका छन् । एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, “आखिर उहाँहरुलाई पद नै चाहिएको रहेछ, सेवामुलकको नाममा प्रालि खोल्ने अनि समितीमा मिसिने ? यात्रुलाई सास्ती दिने ?”
क्यू मिलाउनुभन्दा पहिले झ्याममा बस संचालन गर्दै शारदा यातायात प्रालिले पनि आफुहरुले यात्रुको समस्या मध्यनजर गरेको र कसैसँग नमिलेर नियमित गाडी संचालन गर्ने बताएको थियो । प्रालिका उपाध्यक्ष कर्ण बहादुर बस्नेतले बस नियमित गुड्ने र त्यसको सबै प्रक्रिया मिलाइसकेको बताएका थिए ।
उनले राप्ति यातायात व्यवसायी समिति र नमस्ते राप्ति यातायात प्रालीसंग हामीहरुले छलफल गरेर नै त्यस रुटमा बस संचालन गरे भन्दै झ्याममा काउन्टर बनाई कर्मचारी समेत राखेको बताएका थिए । जसले गर्दा रोल्पा झ्याम, मनिमारे, बडाढुंगा, नाउली, कुकुरगारे र सल्यान बुराँसे, दहखोला र दमाचौर लगायतका यात्रुहरु कोचाकोच गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको थियो ।
तर अहिले शारदा प्रालिले पनि अन्य यातायात सँग क्यू मिलाउदा यात्रुलाई समस्या भएको छ । उता बागचौरको कोटमौला हुँदै डाँगीगाउँ, खोरबारेबाट पातिहाल्न पुग्ने बस अहिले क्यू सिस्टमले खोरबारेमै रोकिने गरेको छ । जसले गर्दा यहाँ यात्रुहरु पनि समस्यामा परेका छन् । यहाँको रुढमा पहिले पातिहाल्न रोकिने बस अहिले सिधै रोल्पाको गंगादेव पुग्ने गरेको छ ।
यात्रु कोच्ने, पैसा कमाउने
कुनै समय थियो सल्यानका प्राय रुढहरुमा बसमा अत्याधिक यात्रुहरु राखेर गाडी संचालन हुन्थे । चाडपर्वमा गाडी भित्र र बाहिर छतमा यात्रुको कोचाकोच हुने गर्दथियो । ट्राफिक चेक पोष्टमा यात्रुहरु ओराल्ने र केहि दुरी पैदल हिडाएर फेरी बसमा कोच्ने काम गरिन्थ्यो ।
त्यसपछि राम बहादुर थापा गृहमन्त्री भए लगतै सिन्डीकेट हटाउने काम गरे भनेर एकाएक चर्चामा आए । उक्त समयमा उनको भाषण नेपालमा सिन्डीकेट हट्यो भनेर मात्रै आयो ।
जसको प्रभाव सल्यान र रोल्पाका यी रुढहरुमा पनि पर्याे । यहाँ एउटा गाडी संचालन हुँदै आएकोमा ४ वटा सम्म गाडी संचालन आए । सल्यानमा धमाधम प्रालिहरु पनि खुले । बाहिरका अन्य प्रालिहरुले पनि सल्यानमा गाडी संचालन गर्न थाले ।
पहिला एउटा गाडी संचालन हुने रुढमा ४ वटासम्म संचालन हुँदा यात्रुहरु खुसी भए । जसले सिन्डीकेट डट्यो भन्दै जयजयकार गरे । तर गाडीले यात्रुहरु नपाएको भन्दै क्यू मिलाउन थाले र विस्तारै पहिले जस्तै एउटै गाडी संचालन गरेर यात्रुहरु कोच्न थालेका छन् ।
अहिले सल्यानमा राप्ती सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति, सल्यान रुकुम यातायात व्यवसायी समिति, सिस्ने हिमाल यातायात व्यवसायी समिति, नमस्ते राप्ती यातायात प्रा.लि., शारदा यातायात प्रा.लि. र सल्यान शारदा यातायात प्रा.लि.ले गरी ६ वटा यातायात व्यवसायी रहेका छन् । यी सबले अहिले क्यू मिलाएर आफुखुसी बस संचालन गर्ने र यात्रुहरु कोच्ने कार्य गरेको पाइएको हो ।
गाडी धनीले नमान्दा नै धेरै बस संचालन गर्न सकिएन: समिती
सल्यानको सबै भन्दा ठुला यातायात भएको सल्यान रुकुम यातायातका अध्यक्ष अरबिन्द्र कुमार राईले गाडीले यात्रु नपाउदा नै धेरै बस संचालन गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । आफुहरुले गाडी धनिलाई थप बस लगाउन कर गरेपनि यात्रु नपाएर व्यवसायी धरापमा पर्न थालेको भन्दै थप गाडी संचालन गर्न नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, “हामीहरु जतिसक्यो यात्रुमुखी सेवा दिन तयार छौँ, गाडीले नै यात्रु नपाएपछि हामीहरु ब्याक भएका हौँ । तर यात्रुहरुलाई समस्या छ भने झ्यामसम्म बस संचालन गर्ने बिषयमा म अझै कुरा गर्छु ।” उनले छिटै झ्यामसम्म बस संचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कोटमौला खोरबारेको बसलाई पातिहाल्नसम्म संचालन गर्ने बिषयमा उनले आफ्नो भन्दा अन्य यातायात व्यवसायीको हक लाग्ने बताए ।
त्यस्तै शारदा यातायात प्रालिका उपाध्यक्ष कर्ण बहादुर बस्नेतले क्यू मिलाउदा रुढको नाममा अलमल भएर विवाद भएको बताए । आफुहरुले क्यू मिलाउदा दमाचौर र खोरबारे नामको रुढ माग गरेको तर झ्याम र पातिहाल्नसम्म गाडी संचालन गर्दा नमस्ते यातायातले गाडी रोक्ने गरेको बताए ।
उनले भने, “हामीले पहिले पठाउदै आएको ठाउँमा नियमित गाडी संचालन गर्नलाई त्यहि नामको रुढ माग गरेका थिइउ, तर अहिले नमस्ते यातायातले त्यो रुढ दमाचौर बजार र खोरबारेसम्म मात्रै हो भनेर माथितिर जान दिएको छैन् ।”
यता नमस्ते यातायातका उपाध्यक्ष कुमार बोहराले तोकिएको समित ठाउँमा गाडी पुर्याउने सहमती गरिएको बताए । उनले गाडी धनिहरुले यात्रु नपाउदा रुढमा थप्न नसकिएको बताए ।
केहि दिनको लागी आफुहरुले हेर्ने र समस्या थप आएमा सबैले छलफल गरेर भनेको ठाउँमा गाडी पुर्याउने उनले बताएका छन् । उनले भने, “हामी यात्रुमुखी हुने हो, यात्रुको माग अनुसार समस्या हल गर्दै जान्छौँ ।”
गाडी थप्न ताकेता गरेका छौँ: ट्राफिक
क्यू सिस्टमले गर्दा रुढहरुमा गाडी कम चलेपछि यात्रुहरुलाई अहिले थप समस्या बल्झीएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सल्यानका प्रमुख ज्ञानेन्द्र शर्माले बताए । पहिले धेरै गाडी संचालन हुनेमा अहिले कम गाडी संचालन हुँदा यात्रुहरु पनि जोखिम मोलेर गाडीमा कोचिन बाध्य भएको उनले बताए ।
उनले क्षेमताभन्दा बढी यात्रुहरु राख्ने गाडीलाई आफुहरुले कारबाही गरिरहेको बताए । उनले भने, “हामीहरु दैनिक ३०–३५ वटा गाडीलाई कारबाही गर्छौ । तरपनि गाडी कम हुँदा बसको क्षमता भन्दा धेरै यात्रुहरु यात्रा गर्न बाध्य छन् ।” आफुहरुले यातायात व्यवसायीलाई यात्रुको चाप हुने रुढहरुमा गाडी थप्न ताकेता गरेको उनले बताए ।